नयाँ वर्षमा सौराहामा आन्तरिक पर्यटक बढे, विदेशी पर्यटकको आगमन भने ठप्प - Narayanionline.com
चितवन, वैशाख २
देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको संख्या केही बढे पनि विदेशी पर्यटकको आगमन भने ठप्प बनेको छ ।
कोरोना संक्रमणपछि गत वर्षबाट पर्यटक आगमन शून्य बनेको सौराहामा कोरोनाको त्रास घटेसँगै यस वर्षको नयाँ वर्षमा भने केही बढेको हो । अब फेरि संक्रमण बढ्दै गएकोले पयर्टक आगमन झनै अनिश्चित बन्दै गएको व्यवसायीहरुले नारायणी अनलाइनलाई बताएका छन् ।
क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दिपक भट्टराईले सौराहाका होटलहरुको अकुपेन्सी ८० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । उनले भने, ‘चैत ३१ गते होटलको अकुपेन्सी ८० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १ गते साँझ भने घटेर ३० प्रतिशत पुग्यो । फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आउने त्रासले पनि धेरै टाढाका आन्तरिक पर्यटकहरु सौराहा आएनन् ।’
गत वर्षको वैशाखदेखि नै विदेशी पर्यटकहरुको आगमन भने सौराहामा ठप्प नै भएको छ । केही नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने विदेशी नागरिक बाहेक अन्य देशको पर्यटकको आवागमन नै छैन । अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘सौराहामा विदेशी पर्यटक शून्य नै भएको छ । त्यसको मुख्य कारण कोरोनाको त्रास नै हो ।’
त्यसैगरी रेवान सौराहाका अध्यक्ष दिपेन्द्र खतिवडाले नयाँ वर्षमा सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढे पनि टाढाबाट पर्यटकहरु भने नआएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘नयाँ वर्षमा आएका आन्तरिक पर्यटकको संख्या सन्तोषजनक नै छ । धेरै टाढाबाट भने पर्यटकहरु निकै कम आए । लकडाउनदेखि यता केही आन्तरिक भर्यटककै भरमा सौराहा चलिरहेको छ । ’
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सन् २०२१ को जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आवागमन ८७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक सार्वजनिका भएको छ ।
विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ)ले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० कोे सोही अवधिको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आवागमनमा कमी आएको हो । सन् २०२० को जनवरीसम्म कोभिड विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको थिएन । २०२० को जनवरीमा ४ प्रतिशतको वृद्धिसँगै डेढ अर्ब व्यक्ति घुमफिरमा निस्किएको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०२१ को जनवरीमा भने युरोपेली मुलुकमा कोभिडको दोस्रो लहर चलेकाले पर्यटक आवागमन प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
पर्यटक आवागमन जनवरीमा सबैभन्दा बढी एसिया तथा एसिया प्रशान्तीय क्षेत्रमा ९६ प्रतिशतले घटेको छ । पर्यटक घुमफिरका दृष्टिले विश्वको पहिलो सूचीमा पर्ने यो क्षेत्रका मुलुकको पर्यटनमा कोभिडले बढी असर गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पनि यसै क्षेत्रभित्र पर्ने मुलुक हो । युरोप तथा अफ्रिकी क्षेत्रमा ८५, मध्य एसियामा ८४ र अमेरिकी क्षेत्रमा ७७ प्रतिशत कमी आएको देखिएको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विभिन्न मुलुकले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धसँगै पर्यटक आवागमन घटेको संगठनले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोभिडको दोस्रो लहरबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका र युरोपसँगै केही हदसम्म दक्षिणपूर्वी एसिया प्रभावित बनेका छन् ।
कोभिडका कारण सन् २०२० मा करिब ७५ प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा कमी आएको थियो । उक्त अवधिमा विश्व उड्डयन क्षेत्रले ३७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको थियो । विमानस्थलले ११५ अर्ब डलर र हवाई कम्पनीहरूले १३ अर्ब डलरबराबरको क्षति व्यहोरेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले जनाएको छ ।
तीन महिनामा ८५ प्रतिशत गिरावट
सन् २०२१ को प्रथम त्रैमासिकमा ८५ प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा गिरावट आउने प्रक्षेपण यूएनडब्लूटीओले गरेको छ । सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा यो वर्ष २६० मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको हो । ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकले फेबु्रअरी पहिलो सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आवागमनलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यस्तै ३४ प्रतिशत मुलुकले ससर्त मात्रै पर्यटक भित्र्याउने गरी मापदण्ड अपनाएका छन् ।
पहिलो ६ महिना विश्व पर्यटन गिरावटमा जाने भए पनि त्यसपछिको महिनादेखि बढ्ने अनुमान संगठनको छ । यूएनडब्लूटीओको प्रक्षेपणअनुसार २०२० को जुलाईको तुलनामा चालू वर्षको जुलाईमा ६६ प्रतिशतले विश्व पर्यटन माथि उठ्ने भनिएको छ । सेप्टेम्बरसम्म पुग्दा २२ प्रतिशतले पर्यटक बढ्ने अनुमान संगठनको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उपलब्धता, यात्राको आत्मविश्वास बढ्नु, यात्रा प्रतिबन्ध हट्दै जाने विश्वासका साथ यो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर, सन् २०१९ को तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा वृद्धि हुन ४ वर्षभन्दा बढि समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा नेपालीकै भर
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर दैनिक डेढ लाख पुग्दा नेपालमा फेरि ५०० बढी पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार ३३० संक्रमित भएका छन् । शुक्रबार २८८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गरिरहेको छ । यसले केही चलायमान हुन थालेको पर्यटन क्षेत्र पुनः सशंकित बनेको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहरले समग क्षेत्र नै चिन्तामा गएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डा. धनञ्जय रेग्मी बताउँछन् । सरकारले विदेशी पर्यटक आवागमनका लागि खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको, भारतसँगका सीमा नाका पनि खोलेकाले पर्यटक बढ्ने अनुमान बोर्डले गरेको थियो । क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा अघि बढेको बोर्डले भारतीय पर्यटक भित्र्याउँन प्रचारलाई तीव्र बनाएको बताउँदै आएको थियो ।
‘भारतबाट मात्रै पनि पर्यटक बढाएर मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई हाँक्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर हामी अघि बढेका छौँ । तर, अहिले कोभिडले केही धक्का त दिएको छ’, डा. रेग्मी भन्छन्, ‘तापनि निराश हुने अवस्था भने होइन ।’
विदेशी पर्यटक नआउँदा पनि आन्तरिक पर्यटकले समग्र पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास बोर्ड कार्यकारीको छ । लकडाउनपछि खुलेको पर्यटन क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले नै थेगेको उदाहरण हामीसँग रहेकाले आत्तिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । खुला सिमाना, भिसा लगाउनु नपर्नेलगायत कारण कोभिड सहज भएको अवस्थामा तुरुन्तै भारतीय पर्यटक बढ्ने अपेक्षा बोर्डको छ ।
प्राकृतिक रूपमा धनी देश नेपालका साहसिक पर्यटन गन्तव्यहरू भीडभाडभन्दा टाढा छन् । यसले गर्दा कोभिडको बीचमा पनि पर्यटक भित्र्याउन सकिने पर्यटनविद् दीपकराज जोशी बताउँछन् । ती स्थानहरूको प्रचार र पर्यटकीय बजारमा विविधता गर्न सके विदेशी पर्यटक भित्रिने उनको भनाइ छ ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय बजार युरोप, अमेरिका, भारतलगायतका देश कोभिडबाट बढी प्रभावित बनिरहेकाले अरू सम्भावित बजारतिर पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनी बताउँछन् ।
चितवनमा १८ करोड लगानीमा सामुदायिक माछा दाना उद्योग सञ्चालनमा, माछामा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य
सौराहाको हात्ती प्रजनन केन्द्रमा नारायणीकलीले जन्मायो छावा
देश जटिल अवस्थामा छ, क्षणिक फाइदाको विषयमा सोच्नु हुन्नः नेता पौडेल
रत्ननगरको विशेष नगर सभा: लालपूर्जा वितरण गर्न कार्यविधि पारित
केपी ओली सकियो भन्नेहरु समानान्तर कमिटी बनाउँदै हिडेको देख्दा अचम्म लाग्छः मन्त्री लामा
कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सौराहाका होटलमा बुकिङ धमाधम रद्द
फेरि बढ्यो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य, यस्तो छ नयाँ मूल्य
कोरोना संक्रमणबाट २४ घण्टामा १६ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४२७ पुग्यो
देउवाको प्रश्न : हर मेजेस्टिज विद्या भण्डारी गभर्मेन्ट भन्ने ?
रेल सञ्चालनको तयारीका लागि यातायातमन्त्री जनकपुरमा,चाँडै सञ्चालनमा आउने
टिपरको ठक्करबाट आमा-छोरीको मृत्यु,काभ्रेको पनौती तनावग्रस्त
नेपालमा अम्पुनको प्रभावले मौसम बदली, बिभिन्न क्षेत्रमा बर्षा हुने